Apokalipsin'i Zefania - Wikipedia
Ny Apokalipsin'i Zefania na Apokalipsin'i Sofonia dia bokim-paminaniana apokaliptika izay ataon'ny mpanoratra azy hoe nosoratan'ny mpaminany Zefania (na Sofonia) nefa tsy isan'ny Baiboly (fa apokrifa na pseodepigrafa) na dia misy ifandraisany amin'ny Testamenta Taloha sy ireo boky apokrifa hafa aza.
1 Fotoana sy toerana nanoratana azy
2 Teolojian'ny Apokalipsin'i Zefania
Fotoana sy toerana nanoratana azyHanova
Noho ny Apokalipsin'i Zefania misy filazana ny amin'i Sozana (ilay voaresaka ao amin'ny Bokin'i Daniela endriny katolika) dia heverina fa voasoratra taorian'ny taona 100 tal. J.K. Nahafantatra ny fisian'io boky io koa i Klemento avy any Aleksandria ka noho izany dia tokony ho voasoratra tany alohan'ny fahefatra faran'ny taonjato faha-2. I Wintermute dia mihevitra fa voasoratra talohan'ny taona 70 io boky apokaliptika io noho izy manao tsiahy fomba nolovana momba ny Edomita.
Tsy ahitana soratra mitovy amin'ny an'ny Kristiana manokana ny ao, ary ireo izay mampahatsiahy ny ao amin'ny Testamenta Vaovao dia azo ampiharina ihany koa amin'ny zava-nitranga teo amin'ny Jiosy. Noho izany dia mety ho Jiosy no nanoratra azy nefa mety nisy fanovana nataona Kristiana. Tao Egipta no toerana mety nipoirany.
Teolojian'ny Apokalipsin'i ZefaniaHanova
Ny Apokalipsin'i Zefania, izay misy fanambaràna mitovy amin'ny an'ny Bokin'i Henoka, dia maneho fa ny fanahin'ny olombelona dia velona any aorian'ny fahafatesana. Avahany tsara ny fitsarana ny olona tsirairay raha vantany vao maty, sy ny fitsarana farany izay hotanterahin'Andriamanitra. Aorian'ny fahafatesana dia halain'ny anjelin'i Satana sy ny anjelin'Andriamanitra ny fanahin'ny lolombelona ka hotsaraina araka ny vesatry ny asa tsara sy ny fahotana nataony nandritra ny androm-piainany. Izany dia midika fa misy akony teo amin'ny Apokalipsin'i Zefania ny fampianaran'ny Fariseo (na Farizianiana). Hiditra any amin'ny fiadanana na any amin'ny fanasaziana ny fanahin'ny olona raha vantany voatsara amin'ny fitsarana voalohany, eo am-piandrasana ny fiavian'ny Tompo, nefa ny fanelanelanan'ny olomasina dia mety hahatonga ny fanasaziana tsy ho raikitra. Tsy mitovy amin'izay ambaran'ny boky hafa nitovy fotoana nisehoana tamin'ny Apokalipsin'i Zefania izany faminaniana izany. Ohatra amin'izany ny hita ao amin'ny Boky faharoan'i Henoka.
↑ Ian K. Smith Heavenly Perspective ISBN 0-567-03107-1 (2006), p. 61
↑ Hedley Frederick Davis Sparks The Apocryphal Old Testament: edited by H.F.D. Sparks ISBN 0-19-826177-2 (1984)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Apokalipsin%27i_Zefania&oldid=972638"
Dernière modification le 22 Jolay 2019, à 11:38
Voaova farany tamin'ny 22 Jolay 2019 amin'ny 11:38 ity pejy ity.